China ERC Enthalpy Okpomọkụ Exchanger Core manufacturers na suppliers | AIR-ERV
A na-eji isi ihe ọkụ ọkụ ERC mee akwụkwọ antiseptik na antibacterial fibrous, bụ nke dị elu nke na-adịgide adịgide, mgbochi-rends, mgbochi-ebu; ya ABS kpuchie siri ike, pro-gburugburu ebe obibi na ogologo oge ọrụ; a na-eji ihe mkpuchi kpuchie ihe mkpuchi ahụ.
A na-edebe mmiri ikuku abụọ ahụ iche iche n'ime ikuku ventilasị ike, wee manye ịbanye n'ime isi mgbanaka ERC, mgbanwe okpomọkụ na iru mmiri site na akwụkwọ fibrous, iji weghachite ume ma nweta ike nchekwa.
A na-ejikarị ya eme ihe maka usoro ikuku ventilat nke obibi, iji weghachite ume na mmiri.
1. Mere nke pụrụ iche fibrous akwụkwọ, na-akwa mmiri permeability, mma ikuku-tightness, mgbochi-rends, merela agadi na-eguzogide, mgbochi ebu.
2. ABS kpuchie, mara mma, ọ naghị adị mfe ịkwụsị, ogologo oge ọrụ, pro-gburugburu ebe obibi, ezi enweghị ike, hụ ike
na ndozi nke usoro, belata azụ azụ.
3. akụkụ anọ ọwa, ezi uche efere anya, obere ime nkwado, obere na-ụzọ na-eguzogide, obere ikuku ọnwụ, mbo ihu na
kacha okpomọkụ Exchanger isi mpaghara, nweta kacha arụmọrụ.
4. Enweghị akụkụ na-agagharị, na ụgwọ mmezi dị ala.
5. Kọmpat Ọdịdị, obere olu, adabara dị iche iche n'oge.
6. Nwere ike iji nhicha ihe nhicha na-eme ka ájá dị ọcha na ozu ndị ọzọ na ngwaọrụ, dị mfe iji na ndozi.
Onye isi igwe na-ekpo ọkụ ọkụ ERC bụ akụkụ bụ isi nke ikuku mgbake ume (ERV), maka oke ikuku ruo 30,000 m3 / h, gụnyere ezinụlọ na ikuku ventilation. Onye na-ekpo ọkụ ọkụ na-achịkwa ventilashị ahụ, weghachite ike ọkụ na mmiri n'oge oyi, ike oyi na mmiri n'oge ọkọchị, ọ bụghị naanị chekwaa ume kamakwa inye ikuku ọhụrụ maka ime ụlọ.
Nke gara aga: ERD Cross & Counter Flow Okpomọkụ Exchanger
Osote: ERB Counter Flow Okpomọkụ Exchanger
ERA Cross Flow Hecha Exchanger
ERD Cross & Counter Flow Okpomọkụ Exchanger